Maka ndị na-ahọrọ iji VLC, congrats na ndị na ị na-ahọrọ na-VLC ụmụ okorobịa. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ mbipụta mgbe ndị mmadụ na-agbalị iji VLC. N'etiti ndị, n'okpuru ndepụta na-agba mbọ depụta ndị nsogbu na-idozi ha. Ebe a bụ ndepụta:
1. VLC 2.2.0 na 2.1.2 n'iyi mgbe mmeghe FLAC Files:
Ụfọdụ ndị mere mkpesa nke a usoro ihe ọhụrụ 2.2.0 (na 2.1.2) n'iyi mgbe mmeghe FLAC faịlụ na-arụ ọrụ na aga na nsụgharị; mgbe faịlụ na-emi odude ke a Obodo mbanye
Ngwọta: N'ihi na ndị mmadụ, ihu n'elu nsogbu, ruo nwa oge fix bụ Nnọchi nke libflac_plugin.dll si \_ Plugins \_ Codec na a n'okpuru otu onye nwere ike na-arụ ọrụ: http://people.videolan.org/~jb/tmp/libflac_plugin.dll
Ọzọ Ngwọta, nke nwere ike ịbụ a na-adịgide adịgide otu:
Gaa na website http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html, bụrụ na ị na-eji Windows dị ka sistemụ na pịa na-esi VLC button ọ na-eje ozi gị elu 32 bit faịlụ ma ọ bụ 64 bit faịlụ .
Pịa uninstall ihe ọ bụla version ị nwetara na-eso ndị ọzọ na-arụ ọrụ usoro njikọ na ibudata na 64 bit version na Wụnye; ọ na-aga idozi niile VLC nsogbu. Ị nwere ike abụ obi ụtọ ịmara na nsogbu VLC 2.2.0 na 2.1.2 n'iyi mgbe mmeghe FLAC Files na-tutu amama ke version VLC 2.2.1.
2. VLC jiri mgbe na-agbalị encode ka FLAC:
Nke a akpan akpan dịruru ná njọ a hụrụ na Ubuntu na bụ otu n'ime ihe ndị kasị nkịtị pụtara nke.
Ngwọta: The ngwọta bụ n'ezie adịghị mkpa na nke a. Ndị a na-azọrọ na a nsogbu mgbe e mesịrị chọpụtara na na VLC 'wizzard' ọ na-ekwu ọ bụghị n'ezie ruru eru na-transcoding, ihe dị nnọọ ka akada netwọk iyi. Ha mesịrị gwa ha na e iji dị iche iche ngwaọrụ encode .ogg video otú n'ezie nsogbu ọ bụla ọzọ site VLC nwere ikike ma ọ bụ enweghị ya
3. FLAC igansu oge na VLC Player:
Ọzọ nke, nke ndị mmadụ pụrụ ihu mgbe ojiji nke Video LAN bụ FLAC igansu oge na VLC Player. N'ihi na ndị na ndị mmadụ, onye na-eche ihu nsogbu na nke a nke, ihe ngwọta na-n'okpuru kwuru:
Ngwọta: Open VLC, Pịa na mwube na mmasị ma ọ bụ jiri Ctrl-S bụrụ na ị nwere ahụmahụ na onye kọmputa. Họrọ Audio, mgbe ahụ, mmepụta modul, Pịa na elu nhọrọ, họrọ Win32 efegharị si ndọtị mmepụta na mgbe ahụ ịzọpụta mgbanwe. Olileanya, ị nwere ike tufuo gị niile nsogbu.
4. FLAC awụgharị na Rincewind:
N'etiti ndepụta nke nsogbu na-eji ndị VLC, FLAC awụgharị na Rincewind bụ nnọọ onye ọzọ. Ụfọdụ ndị na-chọpụtara a nsogbu, Otú ọ dị nke a nke bụ ruo nwa oge na skipping adịghị adịgide adịgide na-eme maka 5 - 10 sekọnd ma ọ bụ na kacha 1 nkeji
Ngwọta: ka a nwa oge fix, ị nwere ike nweta nkwalite gị software ka ọhụrụ version. N'ezie, ọ bụ nnọọ onye ahụhụ na-kpebiri ọhụrụ version nke VLC. Ị nwere ike eche ihe dị iche mgbe ị download a ọhụrụ mbipute nke VLC
5. Ọ dịghị audio mgbe egwu na-akpọ f
Nke a bụ Nsogbu, ndị mmadụ akụkọ ozi na. Ọtụtụ ndị akụkọ ozi na na ihe niile nke na mberede VLC kwụsịrị ịrụ ọrụ, ka a nọ na-arụ ọrụ ezi a ụbọchị tupu. Ụfọdụ Comments kwuru dị ka "Taa, m wee na-egwu a FLAC faịlụ na nwetara enweghị ụda mgbe niile. The mkpado maka faịlụ bụ n'ebe na ọkpụkpọ yiri ka a ga-akpọ faịlụ ejikari dị ka elekere na-aga. " Ha na e na-azọrọ na ha na-eji windows ma gbalịa uninstall ma ọ bụ reinstall, ma nsogbu na-anọgide same.s
Ngwọta: Ọtụtụ a ugboro, Sound kaadị ego n'anya oyi kpọnwụrụ ma ọ bụ ihe ọzọ na omume na-eji ya. All ị chọrọ na ọ bụ Malitegharịa ekwentị gị na PC.
6.-apụghị egwu ele mmadụ anya n'ihu FLAC faịlụ dị ka iyi:
Nsogbu metụtara egwu Ele Mmadụ Anya n'Ihu FLAC Files bụ nnọọ ọzọ nke kọrọ site na ụfọdụ ndị ọrụ
Ngwọta: Ọtụtụ ọrụ ga-enwe mmetụta ala mara na isi ọnụ ọgụgụ nke nsogbu nwere ike izere nanị site upgrading software ndị ọhụrụ. The obere chinchi na njehie, nke VLC chere ihu na okenye na nsụgharị, na-ewepụ ke ọhụrụ version nke software. N'eziokwu, ndị niile softwares nwere otu ụzọ nke njikwa na ihe ọ bụla njehie na chịnchị ego n'anya Bibie n'ime ọhụrụ version.
7. Mandrake Linux agaghị ka m meekwa ka a VLC ndabere ọkpụkpọ maka FLAC faịlụ:
The nsogbu jụrụ onye ọrụ nke ndị dị otú ahụ agwa bụ nnọọ a okwu nke eziokwu nke ochie version.
Ngwọta: Otu dị ka gara aga agbanwe agbanwe, gị mkpa iji kwalite na VLC Version ka 2.2.1 na dị otú ahụ. Gị niile nsogbu ga-arahụ.
E nwere ọtụtụ mbipụta, nke ọrụ na-enweta na kwa ụbọchị na-eji ndị VLC. Ọbụna, ọ bụrụ na ị na-eche ihu ụfọdụ nsogbu na FLAC faịlụ na VLC, na VLC bụ ka onye nke kasị mma nyiwe na-enweta arụmọrụ nke FLAC faịlụ. Nsogbu ọ bụla bụrụ na, na-ebilite, e nwere mgbe ụfọdụ ngwọta na site ọma ọ bụla eri, nsogbu ndị ike iwepụ na i nwere ike inwe ezi ahụmahụ nke FLAC Files.
> Resource> VLC> FLAC Files Issues na VLC na ha njikwa